Akanakisa Cable Tester Mutengesi muChina | Noyafa
NOYAFA Electronic inyanzvi mukuyedza zviridzwa uye tambo testers kwemakore gumi nemashanu
Ipc Kamera Tester
Kwete Kubata Ac Voltage Detector
Distance Area Mesa
Gorofu Laser Rangefinder
Wiring nyanzvi yako inonzwisisa zvaunoda
Shenzhen Noyafa Electronic Co., Ltd inyanzvi mukuyedza zviridzwa uye tambo testers kwemakore gumi nemashanu.
ine akapfuma ODM / OEM ruzivo kune akawanda ane mukurumbira mabhureki kubva pasirese!
Zvigadzirwa zvedu zvikuru: Wire tracker, LCD cable tester, Cable length tester, CCTV monitor tester, Underground wire locator, Laser range finder uye mamwe maturusi ekuyedza.
Yakanakisa NOYAFA multifunction LCD tambo kureba muyedzo FactoryPrice-NOYAFA
NF-868Zvinhu:1. Muedzo wakavhurika, mupfupi, muchinjiko, reverse kubatana uye kuputsika waya positioning.2. Inokwanisa kuyera kureba kwetambo yenetwork, coaxial cable, tambo dzenhare uye USB tambo.3. Kukurumidza kutsvaga waya yakanangwa kana tambo pakati pemhando dzewaya.4. Anti-intecference kana uchitsvaga tambo pane exchanger kana Router. 5. Maitiro maviri ekuongorora: odinary switch / PoE switch. 6. Mabasa ekuchengetedza uye chiyeuchidzo chekugadzirisa data.7. Otomatiki kunonoka simba pa-kudzima uye backlight basa.
NOYAFA Network Cable Tester NF-8108M ye lan tambo
NOYAFA Network Cable Tester NF-8108M ye lan tamboOverviewNF-8108M is network network tester, iyo inoumbwa ne tester (NF-8108), uye 8pcs remote identifier.Inogona kutarisa kukanganisa kwe wiring ye STP/UTP, kuyera kureba kwelan tambo nemazvo. .Inoshandiswa zvakanyanya kune network yekombuta uye mamwe minda.
Noyafa pasi pevhu nyore kushanda Multi function NF-820 cable locator
Mamiriro makuru: ● Wona nzvimbo yetambo pasi pevhu kana imwe tambo isingaonekwe, tambo inosvika 0-2m. ● Signal senitivity yetransmitter uye inogamuchira inogadziriswa. (0-2m) ● Zviri Nyore kuronda neAC Interference Rejection yakakwana ● tone trace live tambo (＜220V) ine socket kudzivirira kupera simba. ● Cable ye trace inokwanisa, senge maconductors, 2-core kana multi-core cable. Benefits: ● Earphone inobatsira kushanda munzvimbo ine ruzha. ● Mutobvu wetambo nesoketi zvinogona kushandiswa panguva imwe chete. ● Kuderera kwechiratidzo chebhatiri. ● Rinochajwazve Lithium bhatiri rekutumira.
NOYAFA NF-8209 LCD Ratidza Measure Kureba Lan Cable POE Wire Checker Cat5 Cat6 Lan Test Network Tool Scan Cable Wiremap Tester
Tsanangudzo yechigadzirwa:NF-8209 chizvarwa chitsva chekupa dhijitari uye analog kusaina zvese mune imwe network toner uye probe. Iyo ine nzira nhatu dzesarudzo dzekutevera tambo sedhijitari modhi, analog modhi uye PoE modhi. Izvi zvinoreva kuti yakashongedzerwa neakanyanya simba tambo nzvimbo tekinoroji kune chero nzvimbo yebasa. Zvakare, inosanganisira kuyera kureba kwetambo, tambo yekutadza kuyedza, PoE kuyedza, hub blink uye NCV basa, zvese izvi zvinoita kuti ive chinhu chinofanirwa-chishandiso kune maenjiniya emagetsi. Kushanda Kwechigadzirwa1. CONT-- Muedzo wakavhurika, mupfupi, muchinjiko, ect we STP, UTP tambo.2. Kureba--kuyera kureba kwe lan tambo, kureba ndeye 2.5m~200m.3. Scan--Analog/Digital/PoE modhi yekutsvaga lan cables.4. PoE-- inowanikwa kune yakajairwa kana isiri-yakajairwa PoE switch (5~60V), tsvaga AT kana AF chiyero chePSE mhando. 5. Flash--tsvaga network pachiteshi nechiedza chinopenya paswitch/ router.Package Inosanganisira: Transmitter 1pc ( bhatiri harisanganisirwe) Receiver 1pc Remote 1pc C Chitupa c C Chitupa c Chitupa c Chitupa c Chitambi
Kana iwe usingakwanise kuwana chero zvigadzirwa zvekunze-pasherufu zvakakodzera purojekiti yako, edza NOYAFA's nyanzvi yekugadzirisa sevhisi rubatsiro.
Noyafa ane nyanzvi R&D dhipatimendi rinosanganisira software& hardware mainjiniya, mold mainjiniya. saka, ODM& OEM masevhisi anogamuchirwa kwatiri. Kazhinji, vatengi vangade kugadzirisa yavo Logo pane chinhu chidzitiro kana label, ruvara bhokisi, mushandisi bhuku, kana katoni.
Kune vamwe vatengi, vachiri kuda kuronga mitauro yakasiyana-siyana kuita zvishandiso, seGermany, Polish, Russian, Turkish, Korean, etc. edu mainjiniya esoftware anogona kuronga zvakare uye kupa mitauro yakawanda kune vatengi. Semugadziri wetambo tambo, noyafa tambo tester, kuhwina mutengi kuvimba nezvinhu zvakanaka.
Gamuchira OEM uye ODM maodha ane nyanzvi R& D timu uye mushure mekutengesa-sevhisi timu.
Kudzora mutengo, kusapfuudza bhajeti, ita kuti zvigadzirwa zviwedzere kukwikwidza mumusika.
Chese chigadzirwa chatinoburitsa chakapfuura kuongororwa kwemhando, kusangana nezvinodiwa.
Own industrial zone
Yedu "Noah nzira" yeindasitiri nzvimbo ine anopfuura 20000 square metres.
Hausi Uropi Hwako
Isu takapa OEM / ODM yekugadzira sevhisi kwemakore makumi maviri nemashanu. Hazvina mhosva kuti zvaunoda ndezvipi, ruzivo rwedu rwakakura uye ruzivo runokuvimbisa mhedzisiro inogutsa. Isu tinoisa simba redu rakawanda kuti tipe mhando yakanaka, sevhisi inogutsikana, mutengo wemakwikwi, kuendesa nenguva kune vatengi vedu vanokoshesa.
Izvo zvese zvinogadzirwa zvinoenderana neyakaomesesa mitemo yenyika. Zvigadzirwa zvedu zvakawana nyasha kubva kumisika yemukati neyekunze. Iye zvino vari kutengesa zvakanyanya kunyika dze200.
SHENZHEN NOYAFA TECHNOLOGY CO., LIMITED inogadzira zviridzwa zvekuyedza zvecabling ndima muShenzhen, China.
Isu takanyanya mukutsvagisa nekusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwekutaurirana network yekuyedza, yakasanganiswa wiring uye zvigadzirwa zvemidziyo. Zvigadzirwa zvikuru ndeWire tracker, LCD cable tester, Cable urefu tester, CCTV monitor tester, POE cheki, Underground waya locator, Laser range. muwana uye mamwe maturusi ebvunzo.
Mushure memakore gumi nemashanu ebudiriro, takagadzira hupfumi hweruzivo mukutengesa uye mushure mekutengesa-sevhisi timu. Vagadziri uye vashandisi mukuumbwa kwemukurumbira wakanyanya. Parizvino, zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kunze kwenyika pasirese, kunyanya kuEurope, Asia. Chero kupi kana chero nguva, zvinogutsa vatengi ndiko kutsvaga kwedu nekusingaperi uye chinangwa.
Parizvino, zvigadzirwa zvedu zviri kutengeswa kupasirese, kunyanya kuEurope, Asia.Kunyangwe kupi kana rinhi, zvinogutsa mutengi ndiko kutsvaga kwedu nekusingaperi.
Noyafa yanga ichishanda kwenguva refu neProkit's Industries Co., LTD kubvira 2012. Kutengeswa kwepagore i500 miriyoni yeUSD, kunyanya kunopihwa cable tester, waya tambo locator uye underground wire tracker.Amazon imwe yevadyidzani vakakosha veNoyafa. Tine vazhinji vanogovera veAmazon. Zvigadzirwa zvakatevedzana zvinosanganisira pasi pevhu waya locator, tambo tester, PoE tambo cheki, waya detector, laser rangefinder. Mutengesi wepamusoro iNF-8209, NF-8601S neNF-488, kutengesa kwepagore kunogona kusvika 6 miriyoni USD pagore.Mobile Tele Systems(MTS) TDR lan cable tester, network wire locator, underground wire detector etc. RBS Telecom(RBS)Vatengi vedu vanovhara mativi ese epasi, Taita mubatanidzwa wakareba uye wakanaka neRBS Telecom muIsrael kwe5years, kunyanya inopihwa cable tester, waya tambo locator. uye pasi pevhu waya tracker.
Kuvhura vhidhiyo yekuyedza yeNoyafa multi function cable tester NF-8601W Yekuyedza Vhidhiyo kubva mutengi wedu
Semumwe wepamusoro mutengesi pakati pese chigadzirwa renji. NF-8601W inohwina mafeni mazhinji kubva pasirese pasirese nekuda kwekushandisa kwayo, mutengo-unoshanda uye mhando yakavimbika. Inogona kuyedza kuenderera kwetambo, kureba kwetambo, nzvimbo yetambo, zvakare kuyedza PoE uye PING. Nemaremote masere anogona kuyedza tambo 8 kamwe chete zvozokubatsira kuvandudza kushanda zvakanaka.Kuti tivandudze kunaka kwechigadzirwa chedu, Noyafa anogara achiedza zvirinani kuunganidza zvese zvigadzirwa inf uye zvinodiwa kubva kune vatengi pasi rese, nerutsigiro rwavo tinogona kuramba tichifamba.
KANA UINE MIBVUNZO, TIRIRA
Ingotiudza zvaunoda, tinogona kuita zvinopfuura zvaungafungidzira.